Psychology in zulu
Umsuka wegama elithi psychology
(1) I-Psychology - Igama elithi "Psychology" lisuselwa kumagama amabili athi "Greek" - Psycho and Logos. NgesiGrikhi, incazelo ye "Psychi" - Umoya neLogos - ithi "Isayensi". Ngakho-ke leli gama Incazelo ephelele ye "science of soul" is. Okusho ukuthi, "olimini lwesiGrikhi", sikhuluma ngomqondo
Isayensi yencazelo yezengqondo
(2) Psychology - Igama elithi Psychology libizwa nge- "Psychology" ngolimi lwesiHindi. I-Psychology isho "isayensi yemicabango" noma - "isayensi yemisebenzi yengqondo". Lokho wukuthi, 'i-psychology yisayensi elawulwa yingqondo yethu, ingqondo. Ukuchazwa kwaleli gama elithi "psychology" kubonwe kuguquka ngokuhamba kwesikhathi.
(3) Ukusukela ekuqhatsheni kuze kufike ngekhulu le-16 CE - kwabizwa ngokuthi "isayensi yomphefumlo". Abasekeli bayo abakhulu - "uSocrates, uPlato, u-Aristotle, uRam, uHobbes, njll.
(4) Kusukela ngekhulu le-16 kuya kwele-17, kwabizwa ngokuthi - "Isayensi yengqondo noma ubuchopho". Abasekeli bayo abakhulu - "Thomas, Reid, Locke njll.
(5) Kusukela ngekhulu le-17 kuya kwele-19 leminyaka - kwabizwa ngokuthi - "iSayensi yeConsciousness". Abasekeli bayo abaqinile - "UWilliam James, Tichner, Jameslee - njll bakwenzile.
(6) Ukusukela ngekhulu le-19 kuya esikhathini esithi "isikhathi samanje" - sabizwa nge "Science of Behavior". Umxhasi wayo wesiteji - ukuphela kuka- "Watson" owenza.
I-Laboratory yokuqala ye-Psychology
Ilabhorethri yokuqala yezengqondo emazweni aseNtshonalanga yaqala ukusungulwa ngu "William Wunt"
Umbono wokusebenza kwengqondo
Ngokusho kukaWilson, "isazi seengqondo" - "Ingqondo ikhona" ohlelweni lwe-limpic ngaphakathi kwengqondo.
Ucwaningo lwe- "Western Psychology" lwaqala eNdiya cishe nge-20 (ikhulu lamashumi amabili).
➤ Kwifilosofi yamaNdiya, ukugcizelela kusifundo nolwazi kanye nokuhlangana kwezindlela ezithile kwezengqondo. Lapho kugcizelelwa khona ukutadisha unembeza (ingqondo, ubuhlakani, ubuchopho, umphefumulo kanye nomqondo) njll. Kulokhu, lokhu kuchazwa kuchazwa ku "corpus ezine". Okusho ukuthi, kuye kwagcizelelwa ukuthi kuqondwe kahle ukusebenza komuntu okuvela kulezi zingcebo ezine.
Leyo minotho emine imi ngale ndlela elandelayo -
U-Annamaya Kosha - Ngaphansi kwe-Anmaya Kosha, kufundwa i- "Gyanandris" ne "Karma Indras" yomzimba wethu.
I-Pranmaya Kosh - Ngaphansi kwe "Pranmaya Kosh" kwifilosofi yamaNdiya - "Amandla ngokomzimba" kanye ne "Prana Shakti" afundwa kakhulu.
(iii) UManumaya Kosh - Ngaphansi kwefilosofi yamaNdiya - "ingqondo" yengane ifundwa ngaphansi kuka "Manumaya Kosh".
(iv) UVigyanamaya Kosh - Ngokusho kwefilosofi yamaNdiya - "Ukuhlakanipha" kwengane kufakwe ngaphansi kwe "Vigyan - Maya" Kosh.
Amanothi wesayensi yezemfundo
Qaphela- i-Psychology iyingqangi yefilosofi - kusuka lapho yahlukaniswa kuqala yi "William James".
Ngokusho kwe-Indian Psychology - I-Psychology yisayensi elondolozela okuhlangenwe nakho okutholwe "ezinzwa zangaphandle" ezisebuchosheni bethu. Ngamanye amagama, okuhlangenwe nakho okunjalo okuphephile emiqondweni yethu - ukuhlakanipha - i-ego - umphefumulo njll - kungokwengqondo. Izazi zezengqondo noma abacabangi baseNdiya babize ingqondo ngokuthi "umuzwa wesithupha".
Isazi seengqondo - Ngokusho kuka-Fechner - "Ucwaningo lwe-psychology - ukuthuthukiswa kwezindlela ze-psychodynamic.
Ngokusho kwesazi sokusebenza kwengqondo uFied and Chugh - "I-Psychology inamazinga amabili - kuyo
Izinga lokuqala lithi - liyazi kanti leloveli lesibili lingelingqondo - yingakho -Fry noChugh - libizwa nangokuthi ngubaba wesayensi eyazi futhi engenalo ulwazi. "